Novelas မော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Novelas: လုံးဝလိုက်နာရန်ပေါ်တူဂီတယ်လီနိုလူ ၆ လုံး !!! - ဗီဒီယို
ချစ်ခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ အိပ်မက်ခရီးစဉ်အပြင်လှုပ်ရှားမှု၊ လက်စားချေခြင်းနှင့်သစ္စာဖောက်ခြင်း - telenovelas ၏ပါဝင်ပစ္စည်းများ ..... ၂၉.၀၁.၂၀၂၀ ကလပ် de de Novelas ™ Mag ။ သတင်း• ၂၀၂၀ •အားလုံး…
Novelas: 'Tears of Paradise' ၏တရားဝင်နောက်တွဲယာဉ် - Novelas TV - Video
သူ၏ဗိသုကာကျောင်းအတွက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား၌ Cennet သည်ကားတိုက်ခံရခြင်းနှင့်လွဲချော်သွားသည်။ လုလင်တယောက်သည်သူ့အားကူညီရန်ထွက်လာသည်။ ထိုမိန်းမငယ်ကအပြင်းအထန်ငြင်းဆန်သည်။ ခုနှစ်တွင် ...
Novelas: 'ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏နာမ၌' ၏တရားဝင်နောက်တွဲယာဉ် | ဖေဖော်ဝါရီလမှာ Novelas တီဗီမှာ…
၄၇ မိနစ် ၄၅ ခုပါ ၀ င်သောဤစီးရီးကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်မည့်ရုပ်သံလိုင်းတွင် Clara ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်။ သူသည်ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်၊ မိသားစုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သူမဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးရန်ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Novelas: Amours Coupables - ကွင်းဆက်မှာဒီည! - ဗီဒီယို
ဒီဗီဒီယိုကို https://www.youtube.com/watch?v=-SRiZa4Oi1U တွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည်
Novelas: မကြာမီရုပ်မြင်သံကြားတွင်ထုတ်လွှင့်တော့မည့် Telenovela! (ဇန်နဝါရီလ 2020) (2/2 ...
ဤဗီဒီယိုသည် https://www.youtube.com/watch?v=nr95cdtYi-g တွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည်